Ihe bụ isi ederede nke Mb a na-akwado ihe odide oge ochie | Apg29
Ihe bụ isi ederede nke Mb a na-akwado ihe odide oge ochie
Site Bo Hagstedt, onyeisi oche, André Juthe Ph. D. Swedish Mb.
Isiokwu a gosiri doro anya ihe atụ nke otú nhọrọ nke ọhụrụ isi ederede gara.
→ Download isiokwu dị ka a pdf faịlụ.
Isiokwu a gosiri doro anya ihe atụ nke otú nhọrọ nke ọhụrụ isi ederede gara. Iri na abụọ ihe atụ ndị dị n'isiokwu a na-egosi ihe na-agụnye:
Ihe bụ isi ederede nke Mb, nata Text, nwere nkwado si ochie Aleksandria odide.
The ndị ikom ise, bụ onye nyere anyị ọhụrụ isi ederede, nwere mkporomaasi na Byzantine ederede.
The eziokwu na ọtụtụ n'ime ha chere na mbụ Gospel gbasara ọnụ. Ọ we bilie mgbe ọjọọ na-edeghị ede nnyefe, nke chọọchị ahụ gbazie. Ha rụrụ ụka na Byzantine ederede bụ a mesịrị Ecclesiastical ederede nke gbazie njehie nke di n'ebe site ná mmalite.
Na ọ bụrụ na otu odide file gụnyere ihe odide oge ochie, na-enye nkwado maka nri okwu otú ha họọrọ na-ezighị ezi, n'ihi na ha kweere na kpatara bụ n'ebe ahụ site na mmalite nke Church ebe gbazie. Ma nke a na-arụ ọrụ bụ kpam kpam unbiblical, n'ihi na Jehova na-ekwu na Akwụkwọ Nsọ dum nyere site n'ike mmụọ nsọ Chineke, nakwa na ọ ga na-edebe okwu ya.
Aila Annala-arụ ụka na ihe ochie isi ederede site na 1500s, ndị nata Text dabeere n'ihe odide 900-1200 narị afọ. Otú ọ dị, nke a bụ a tenacious akụkọ ifo. Nke bụ eziokwu bụ na nata Text na-dabeere na okenye odide, nke isiokwu a ga-egosi. Anyị na Mb kwere na Akwụkwọ Nsọ na isi ederede E chekwawo n'oge anyị site n'uche Chineke nduzi.
Ụfọdụ oge gara aga, Aila Annala, isi nsụgharị nuBibeln, otu isiokwu dị na World Today ebe ọ kwalitere na anyị na Kraịst na-ekwesịghị na-arụ ụka banyere Akwụkwọ Nsọ. Ọ na-ekwu na Sweden anyị nwere ọtụtụ ezi nsụgharị bụ ezie na anyị na-a obere na de-Kraịst obodo nakwa na ndị a nsụgharị Baịbụl na-arụkọ. Aila akwa ụta na ụfọdụ ndị na ebubo ndị Bible na 2000 maka mbọ ibibi chi nke Kraịst. Ọ na-ekwu na ọhụrụ nsụgharị dabeere na ọhụrụ isi ederede site na 1970 na-yikarịrị ka eme mma n'ihi na nke anyị nwere ugbu a ukwuu ohere okenye odide.
Anyị si Swedish Mb bụ nke a dị iche iche echiche. Ọ bụghị a zuo ezu dị iche iche nsụgharị emegide isi Christian ozizi. Anyị na-adịghị na-arụ ụka banyere Akwụkwọ Nsọ, ma n'aka nke ọzọ, anyị na-achọ iji chebe Akwụkwọ Nsọ na ya nkiti ederede, anyị kwere, site nduzi nke Chineke anọwo na-echekwawo na oge anyị. Na Chineke ga-echebe ya na okwu ya bụ Bible onwe doro anya àmà (Isaiah 40: 8. Neh. 8: 8. Psalm 12: 6-7, 119: 152nd Matthew 5:18. Lk. 16:17. Rom. 15: 4 . 1 Pt. 1: 23-25). Ọ ga-abụ nnọọ ike ịtụkwasị obi na Bible ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịdabere na ya ederede chebere. Olee otú anyị si mara ihe atụ nke na ọ dịghị uru ọ chọpụtara nke okenye odide na-ọbụna ihe abbreviated karịa Aleksandria ederede na-eme ka ederede anyị ugbu a, kwere bụ okwu Chineke, bụ n'ezie n'ebe ahụ? Na njedebe, dum okwu Chineke ghara ikwe na.
The Bible na 2000 ebelata nke chi nke Kraịst abụghị a obi ebubo, ma naanị eziokwu eziokwu. Ọ bụ iji na-agụ na Rome. 1: 4, bụ ebe na 2000 na Bible kwuru na Jizọs na-arụnyere dị ka Ọkpara Chineke site na ya na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Ma Jizọs nọ na-asian na Ọkpara Chineke site na ya na mbilite n'ọnwụ - na a mụrụ dị ka nwa nke Chineke na nwa nke Chineke ná ndụ ya nile, ọnwụ ya, na mbilite n'ọnwụ ya na mgbe ebighị ebi. Ọzọkwa, Jizọs na-akpọ Ọkpara Chineke na a obere ajị agba, na mgbe otu ụbọchị kpọọ ikpere na-ekwupụta na Jizọs dị ka Jehova, Phil. 2:11, na-ede na nwa amadi na obere h, mgbe akpọ Peter nkume na a isi obodo C na Matt. 16:18.
Aila azọrọ na ọ FNns ederede na Ọrụ Ndịozi. 9: 6 nke na-kwukwara na ndị nata Text. Ọ bụ eziokwu na ndị na-esonụ okwu na Ọrụ Ndịozi. 9: 5-6 na-efu na ọtụtụ n'ihe odide Grik:
Amaokwu 5. "Ọ bụ ike ka i agaghịkwa megide pricks." Ọ bụ eziokwu na okwu ndị a na-efu efu na ọtụtụ n'ihe odide Grik ma ha FNns na ochie Latin odide, na Vulgate. The okwu na-na a Siria Peshitta odide na na odide Grik, koodu E, na 431, ma na amaokwu anọ kama. Ọzọkwa FNns okwu niile odide Grik nke Ọrụ Ndịozi. 26:14.
Amaokwu 6. "Ma jijiji na anya, ọ sịrị: Jehova, ihe ị chọrọ ka m mee? Jehova we si ya. "Okwu ndị a na-kọrọ ọtụtụ n'ihe odide Grik ma dị nnọọ ka okwu n'amaokwu nke 5 FNns kasị nke ochie Latin odide, na Vulgate, na ụfọdụ oge ochie Siria na Coptic nsụgharị. Ke adianade FNns nwekwara ndị a niile odide Grik ka okwu nke v5 n'ebe ọzọ na akwụkwọ Ọrụ Ndịozi (Ọrụ. 22:10).
Ihe kacha mkpa nkwenye nke okwu nke amaokwu nke 5 na nke 6 bụ ezi na-egosi na Akwụkwọ Nsọ, site n'otu ederede na-egosi na abụọ ndị ọzọ na ebe Ọrụ Ndịozi, Ọrụ Ndịozi. 22:10, na 26:14.
Ma ohere okenye odide, ọ bụ eziokwu na taa anyị nwere ukwuu ohere okenye odide karịa ha nwere na 1500s. Aila-arụ ụka na ihe ochie isi ederede site na 1500s, ndị nata Text dabeere n'ihe odide 900-1200 narị afọ. Otú ọ dị, nke a bụ a tenacious akụkọ ifo. Nke bụ eziokwu bụ na nata Text na-dabeere na okenye odide. Aila jụrụ na ya ikpeazụ akara nke ndị a odide ndị. Anyị ga ugbu a na-akọwa ihe ndị a bụ. Ma mgbe anyị na-ele anya na na odide oge ochie na Grik, nke si na 350 400 si, n'ihi ya, ọ nwere ike anya dị iche iche si a na Baịbụl ọzọ. Ma, anyị na-ele anya na ihe odide site na 500 ruo n'oge 1500s ka Byzantine odide nke zuru ọtụtụ na ha nọ magburu onwe agreement.
Metzger ekweta na "The History of NT Nnyocha e nyochara" nke Byzantine ederede chebere a läsvariation na ike ikwu na nke abụọ ma ọ bụ narị afọ nke atọ mgbe ọ chọpụtara nke papaịrọs odide, p45, p46 na p66.
Nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe echiche emetụta ụfọdụ usoro
Tupu anyị anya na kpọmkwem amaokwu, anyị mbụ chọrọ ikwu na anyị na mbụ rụrụ ụka na ọtụtụ isiokwu, wdg ezi nke Byzantine odide. Ndị a odide nwere oké anọgidesi na nwere - dika anyị na-ahụ na ọ na - site na nduzi nke Chineke chekwara mbụ isi ederede. Chineke kwere ná nkwa iji chebe Okwu ya, na ọ bụrụ na ọ na-adịghị ahụ nata Text bụ Chineke chekwara okwu, ederede bụ ya na Aila kwere na Mmụọ Nsọ chebere site na narị afọ? O doro anya na kemgbe ụwa anọwo na ndị, dị ka Origen, Eusebius, Westcott na Hort bibiri họọrọ dị otú ahụ agụ ebe Jesus 'divinity bụ edoghị ha n'ihi na ha ekweghị na Jizọs bụ nke otu uwa ka Nna. Ọ bụ n'ezie ezi na-atụ anya,
Nhọrọ antibysantisk nhọrọ usoro
Anyị ga-enye ugbu a a ihe atụ nke otú ndị dị otú ahụ a nhọrọ nhọrọ usoro kwetara n'oge a. N'ihi na anyị aka ịghọta otú nhọrọ nke ederede gara, ọ dịkwa anyị mkpa ịma ihe banyere ndị ikom ise bụ ndị na 1970 nyere anyị ọhụrụ isi ederede na-arụ ọrụ ihe nlereanya ha na-eji. Olee ụdị ihe odide kwadoro ise a editọ? Carlo Martini nke Catholic Church ọkọnọ odide Vaticanus, bụ onye si Alexandria. Bruce Metzger emeghị ka ojiji nke Byzantine ederede dị ka ọ na-ewere ya na-adị rụrụ arụ. Allen Wikgren chọrọ iji ochie ozizi ihe na-agbalị iji weghachi odide mbụ. Nke ahụ pụtara na ọ chọrọ ka ojiji nke dị ederede dị na Byzantine odide na nata Text, ma ọ chọrọ iji weghachi ederede nke a kwesŽrŽ okenye na ndị ọzọ mbụ ụdị site na odide na si Alexandria. Matthew Black chere na Byzantine ederede ụdị bụ ndị mbụ ma a gasịrị merged na ndị ọzọ Atad Ecclesiastical ederede. N'ikpeazụ, anyị nwere Kurt Åland dị ka ma na-ahụ maka ihe odide Grik, NestleAland 1979 (Ndị mmadụ nke Bible na nuBibelns isi ederede), na United Bible Societies Greek Text, 1975 (Bible 2000 isi ederede). Åland chere na ha ga na-eme ka ojiji nke Byzantine ederede ụdị, n'ihi na ọ bụ na-adịghị mkpa ka odide mbụ. Anyị na-ahụ na ihe niile ise kwetara na ha ga-agbalị na-recreate a ọzọ odide mbụ na ochie odide si Alexandria, na hụrụ Byzantine ederede ụdị na mgbe e mechara merged na ndị ọzọ Atad Ecclesiastical ederede. Ọzọkwa, dị ka ma ndị Black na Metzger na mbụ ozioma nke n'oge mgbasa ọnụ tupu ya aka na ala na otú bilie na-ezighị ezi. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) njehie gbazie kemgbe chọọchị na Byzantine odide, n'okpuru ndị ikom ndị a chepụtara.
Metzger ekwu n'ụzọ doro anya ha na-arụ ọrụ nlereanya na otu nke ya akwụkwọ: "Mgbe odide nke a Nna nke Church dị iche na a na Baịbụl, ọ na-abụkarị ihe kasị mma na-anabata ya dị ka dị iche iche si mesịrị okpukpe ederede (Byzantium ma ọ bụ Vulgate)". (1. Metzger, page 87) nwetara, na nhọrọ nke ruturu si Fathers, ma anyị ga-ahụ nke ọma na a na-arụ na-ndabere maka nhọrọ nke ederede na Bible n'ihi na ederede.
Mkpa odide oge ochie
Ọ FNns a ọnụ ọgụgụ nke ihe odide oge ochie, dere na nnukwu akwụkwọ ozi, nke bụ mkpa karịsịa maka ndị a editọ n'ihi na ha niile nọ na-nnọọ agadi. Ọtụtụ mgbe, ndị odide na n'isi obodo tọrọ ndị na obere akwụkwọ ozi. Anyị akụkọ, anyị na-anakọtara data tumadi si akwụkwọ nke JA Moorman, Early Odide, Church Fathers, na Ikike Version, (4. Moorman) na Bruce M. Metzger akwụkwọ, A Nnyocha e nyochara Commentary on the Greek New Testament, (2. Metzger) ebe a bụ ndepụta nke ụfọdụ n'ime ihe odide e dere nnukwu letters:
Usoro Sinaiticus (Alef) si 300 si. Dere dum NT.
Usoro Alexandrinus (A) site 400 si. Nwere fọrọ nke nta niile NT.
Usoro Vaticanus (B) site 300 si. Nwere fọrọ nke nta niile nke NT ma e wezụga anọ ikpeazụ akwụkwọ nke New Testament.
Usoro Ephraemi Rescriptus (C) site 400 si. Nwere NT.
Usoro Bezae Cantabrigiensis (D) site 400 si. Nwere Oziọma na Ọrụ Ndịozi.
Usoro Claromontanus (D) site 500 si. Ọ akwụkwọ ozi Pọl na Grik, Latin.
Usoro Basilensis (E) si na 700 si. Nwere Oziọma.
Usoro Washingtonianus (W) site 400 si. Nwere Oziọma.
Ọzọkwa FNns ndị iberibe si a ọnụ ọgụgụ nke ihe odide na-ọbụna ndị agadi ma na-akpọ papaịrọs odide. Anyị ga ugbu a anya na ụfọdụ kpọmkwem Bible amaokwu ịhụ na-arụ ọrụ ihe nlereanya, ndị a na ise ndị na etinyere ya.
Jon. 7: 8 ka na-efu na ụfọdụ ihe odide
Na Jon. 7: asatọ Jizọs kwuru na amaokwu 8 na ọ gaghị eso ememme na Jeruselem ma na amaokwu nke 10 na ọ na-ekwu na mgbe ụmụnne ya gara oriri, mgbe ahụ, ọ na-gara ebe ahụ. Ọtụtụ ihe odide nwere okwu ma. Okwu ka dị mkpa n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-efu, Jizọs kwuru abụghị eziokwu. Dị ka okwu ma FNns n'oge odide dị ka papaịrọs 66 na 75 na ederede na-akatọ 'mmasị aka dere Vatican, ha kwesịrị họọrọ läsarten. Lee, anyị pụrụ ịhụ na nchịkọta nke ndị kasị ochie odide:
Anyị na-ahụ na chịkọtara nkwado ọbụna ịbụ na kpamkpam n'etiti ndị kasị ochie odide tinyere papaịrọs odide P66 na P75 si 200 si. Na njikọ na ise editọ nyere anyị ọhụrụ isi ederede na 1975, mgbe ahụ, nyere Metzger bipụtara akwụkwọ nke ọ na-weere comments on nhọrọ ndị ha mere na onye ọ bụla na Baịbụl. Ebe ọ na-ede na-esonụ comment:
"The ederede ma e gụnyere n'oge n'ibelata ahụ ekwekọrịtaghị n'etiti amaokwu 8 na nke 10." (2. Metzger, p. 185)
Nke a abụghị a na nkà mmụta sayensị na nkwupụta, ma naanị ihe ọtụtụ ndị chere enweghị ihe ọ bụla na-egosi. Mere chepụtara a Bible editọ nke ka na-efu site ná mmalite? Ọma n'ihi na ihe odide mbụ nwere njehie, dị ka ha, nwere obere n'ihi nke ọnụ na nnyefe, ha chọrọ iji weghachi ederede akpasarade udi ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị njọ. Ma ndị Byzantine ederede na Vulgate bụ a mesịrị Ecclesiastical ederede dị ka ndị a editọ. Ma gịnị mere na-anabata na ọbụna ndị e site na mmalite mgbe ha mmasị aka dere, na Vatican, na abụọ nke papaịrọs odide nwere okwu ma eziokwu? N'ihi na ha adi ederede dị iche n'ebe e mesịrị okpukpe ederede dị ka Vulgate. Azịza ya bụ na ise a editọ na-arụ ọrụ nlereanya niile e kwuru na bụghị ikpeazụ nke niile bụ iji na-eso Vatican, ma, ọ bụ n'elu ihe nile na-ekwesịghị iso na "okpukpe ederede" n'ụdị Byzantine odide. Ọ bụghị na-eso Byzantine ederede na Kraịst na chọọchị ikwesị ntụkwasị obi na trad mere n'ihi na ihe karịrị iri na ise na narị afọ dị mkpa karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ihe dị mkpa karịa n'ozuzu ederede ihe onwunwe na ya dị mkpa karịa ha mmasị aka dere Vatican okwu megide ha. Ọ bụ nke a antibysantiska stance kasị akụkụ pụrụ iche nke ise a editọ ederede nhọrọ. Ọ bụ ihe dị mkpa karịa n'ozuzu ederede ihe onwunwe na ya dị mkpa karịa ha mmasị aka dere Vatican okwu megide ha. Ọ bụ nke a antibysantiska stance kasị akụkụ pụrụ iche nke ise a editọ ederede nhọrọ. Ọ bụ ihe dị mkpa karịa n'ozuzu ederede ihe onwunwe na ya dị mkpa karịa ha mmasị aka dere Vatican okwu megide ha. Ọ bụ nke a antibysantiska stance kasị akụkụ pụrụ iche nke ise a editọ ederede nhọrọ.
Mark. 1: 2 ma ọ bụ amụma, Aịzaya onye amụma
Na Mark. 1: 2, ajụjụ bụ ma ọ ga-abụ 'Aịsaịa onye amụma,' ma ọ bụ 'amụma. E nwere ihe abụọ ruturu, mbụ na Malakaị na ndị ọzọ na-abịa site na Isaiah. Ya mere, ọ bụ eziokwu dee amụma. Ebe a bụ a nchịkọta nke ndị kasị ochie odide:
Metzger enye ndị na-esonụ comment dị ka ihe mere ha na-ahọrọ Aịsaịa onye amụma:
"Ọ bụ ya mere mfe ịhụ ihe mere ndị depụtaghachiri ya gbanwere okwu" Amụma Aịzaya "(na agụ na FNns na mbụ àmà nke Aleksandria na Western ederede ụdị) na ọzọ ọtụtụ mmeghe sụgharịa" ndị amụma. "(2 Metzger, page . 62)
Dị ka Metzger, ọ bụ ya mere kasị mma ịhọrọ "Aịsaịa onye amụma," ọbụna ma ọ bụrụ na ọ FNns a ọtụtụ ná ndị odide nke uppercase na lowercase akwụkwọ ozi na-akwado ndị amụma dị ka Aịzaya onye amụma dị iche n'ebe e mesịrị Ecclesiastical ederede (ie Byzantine). N'ihi ya, ọ bụ n'ezie dịghị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ ihe nlereanya ha soro, ma naanị a ntule, bụ nke na-na Akwụkwọ Nsọ ederede nwere njehie site ná mmalite. Rịba ama na aka dere Alef (Sinaiticus), bụ nke nwere ọtụtụ njehie, otu njehie na Matt. 13:35, ebe ọ na-bụ Aịzaịa onye amụma, ma see okwu si na Abụ Ọma 78: 2nd Nke a njehie e Otú ọ dị bụghị mma mgbe e nwere ndị ọzọ n'ihe odide Grik na otu njehie.
Mark 9:42 Onye kwere m
Mark 9:42 Ma onye ga-ewe ya iwe otu n'ime ndị a dị nta nke kwere na m, nke a bụ okwu m omitted na ụfọdụ n'ihe odide. Ebe a bụ a nchịkọta nke odide ihe:
Anyị na-ele nchịkọta nke ihe na-akwado okwu 'm' bụ nnọọ ike n'etiti ihe odide oge ochie gụnyere Vatican na FNns na ma ndị Vulgate na na ọtụtụ ndị odide na uppercase na lowercase leta. Ma Metzger dere na ha na-ekwu na FNns a-ekwe omume ka okwu e gụnyere site yiri kama na Matiu 18: 6 N'ihi nke a, ha bụ ndị na-ala azụ n'okwu ndị a na-etinye ha na parentheses. Ma isi ihe mere na ha adịghị enye bụ n'ezie ha antibysantiska arụ ọrụ nlereanya: "Mgbe ọ na-FNns iche, ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe na-ahọrọ ederede na si dị iche na mgbe e mesịrị okpukpe ederede, ie Byzantium ederede. "(1. Metzger, p. 87)
Matt. 5,22-ezighị ezi
Ma asim unu, Onye ọ bula bụ iwe ya na nwanne ya na-enweghị a ezi ihe mere, ọ na-aghọ atụba maka ikpe ikpe. Ebe a bụ okwu na-enweghị a ezi ihe mere omitted na odide Grik. N'asụsụ Grik, ọ bụ nnọọ a okwu. Ebe a bụ a nchịkọta:
Ọ FNns ike nkwado ndị meworo okenye odide na ọbụna kwuru si Church Fathers narị afọ nke abụọ n'ihu n'ihi na ọ dịghị ezi ihe mere bụ ezi ma Metzger dere, nke a na ya kwuru, sị:
"Mgbe na-agụ na" ọ dịghị ezi ihe mere "nile narị afọ nke abụọ n'ihu, ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri ka okwu e kwukwara, site na onye depụtaghachiri ederede nro tupu akụkụ Akwụkwọ Nsọ ogo, karịa okwu ga-e omitted dị ka mkpa." (P . 11, Metzger 2)
Metzger na ndị ọzọ editọ ga-ahụ naanị ihe mere okwu ga e kwukwara, ma ọ na-emeghe ka echiche na onye depụtaghachiri Agbaghara a okwu. Gịnị mere ha ji mee nke a oke? Mgbe ị maara ha antibysantiska arụ ọrụ nlereanya ka ị na-aghọta ihe mere. Ha na-ahọrọ ndị ederede na deviates si "mgbe e mesịrị Ecclesiastical ederede (ie Byzantine). A ọzọ mere maka omitted n'enweghị ezi ihe kpatara ya bụ na chọọchị nna Origen nwere odide na nwere nke a, ma chere enweghị ezigbo ihe mere e kwukwara. (3. Burgon, p. 359-360)
Lk. 2:33 Joseph ya na nna ya
Ụfọdụ ihe odide nwere "Joseph nne-ya anya ..." ka ndị ọzọ na ihe odide nwere "Nna ya na nne anya ...". Ọ bụrụ na a ga-Joseph ya na nna ya dị ezigbo mkpa na-ele-amaghị nwoke mụrụ. Lee bụ nchịkọta si:
Anyị na-ahụ nchịkọta na a n'ọnụ ọgụgụ nke odide Grik nke uppercase na lowercase akwụkwọ ozi na-enye nkwado maka na ọ ga-Joseph, na-a otutu nke ochie Latin odide. Na Tatian chịkọtara Oziọma anọ dị ka o mere banyere 170 afọ, kwuru, sị Josef. Ma Cyril nke Jerusalem odide, na-arụ ọrụ dị ka afọ 300, kwuru, sị nna ya.
Metzger na-ekwu na ha (ie, ise editọ) kweere na Church gbazie njehie iji chebe-amaghị nwoke mụrụ. (2 Metzger, p. 111-112) Ọ FNns odide oge ochie nke ma na-enye nkwado maka Joseph na nna ya. I nwere ike igosi ihe ọ bụla, ma na ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime nhọrọ. Metzger na ndị ọzọ editọ họrọ enweghị ihe àmà nke nna-ya na ezi na kpatara bụ n'ebe site ná mmalite wee gbazie Chọọchị nke njehie. Ma "njehie" bụ n'ebe ahụ site ná mmalite, mgbe ahụ, a ntule dabeere na unproven ọtụtụ ndị chere na ndị njehie na-akpaghị aka ga-itie ke onu nnyefe. Ke adianade do, ọ bụ ihe ọzọ na ihe unproven ntule na nyefe wee ebe naanị ọnụ. Ha na-anọgide na-eso ha antibysantiska arụ ọrụ nlereanya, iji họrọ ederede na deviates si "mgbe e mesịrị Ecclesiastical ederede", ie Byzantium ederede.
Matt. 6: 1 Onyinye ma ọ bụ ezi ọrụ
Ọ bụ ezie na nkwado bụghị dị ka ike onyinye n'etiti ndị kasị ochie odide otú FNns ole na ole ihe odide oge ochie na-enye ya ya support. Ọzọkwa FNns onyinye n'etiti Tatian na Origen dere. Tatian bụ ifịk ke mbubreyo 100 na Origen na n'oge 200 si. Otu ọ dịghị mkpa na-abụ onye a ma ama ọzọ na-akatọ na-aghọta na läsvarianten "lezie anya nke na-eme ezi omume" bụ a na-ezighị ezi oku nke bụ ihe megidere ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ ederede. Dị ka ma nhọrọ ike deere azụ ná mmalite oge Ndị Kraịst, oke kwesịrị eke ịmata onyinye ahụ dị ka ezi dị ka ederede kwesịrị kwekọrọ ndị ọzọ Bible kwuru. Ọ bụ Onyenwe anyị n'onwe ya onye exhaled Akwụkwọ Nsọ dum. Ma dị mwute ikwu na-ahọrọ ndị a editọ ụgha n'ihu ihe ziri ezi. Ọtụtụ n'ime ndị editọ chere na e nwere ndị na njehie na ederede n'ihi na nke onu nnyefe nke Church ebe gbazie. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) Ma okwu Chineke gafeere ọnụ ndị mmadụ bụ ụgha na-gbaghara site Onyenwe anyị na ya mgbe ọ sịrị na "Akwụkwọ Nsọ dum nyere site n'ike mmụọ nsọ nke Chineke." (2 Tim. 3:16)
Mark. 10:24 ntụkwasị obi n'akụ na ụba
An karịrị n'ọnụ ọgụgụ nke Gris oge ochie na Latin odide-akwado efu okwu na abụọ odide Vaticanus na Sinaiticus. Metzger enye ndị na-esonụ comment: The ogo nke okwu Jizọs e ịrọ arọ site iwebata ọzọ kvalifkation egbochi ya generality me ya nso ka onodu nke ederede. (2 Metzger, p. 90) Ọ bụghị n'ozuzu odide ihe kpebiri ha na-ahọrọ na-enweghị a maa na-agbanwe agbanwe na ha enweghị ihe ndabere antibysantiska arụ ọrụ nlereanya.
Lk. 9:35 hụrụ n'anya ma ọ bụ họrọ
The n'ozuzu odide ihe onwunwe na-enye nkwado maka Ọkpara ọ hụrụ n'anya. Metzger kwuru bụ:
Na mbụ ya na Luk doro anya na guzo Họọrọ, nke pụtara nanị ebe a na New Testament. Nke abụọ nhọrọ, nke na-agụnye a ihe nkịtị okwu, bụ n'ihi na ede ọnụ FL ätning Ọkpara ọ hụrụ n'anya. (2. Metzger, p. 124)
Mfråga anyị: Site na ihe Jizọs na-ahọrọ? Olee otú onye na naanị otu n'ime ndị mbụ a họọrọ, anyị ga Ọkpara ga-ahọrọ? Anyị abụọ ọzọ na ndị fọrọ nke nta ka ochie ịhọrọ site na. Metzger bụ nnọọ n'aka na ọ na mbụ kemgbe onye a họọrọ. Ọ bụrụ na ị kwere na Akwụkwọ Nsọ e nyere site na mmụọ nsọ nke Chineke, ma ederede bufere site n'ọnụ na ezughị okè mmadụ, mgbe ahụ, FNns ọtụtụ njehie na mkpa ka a gbazie. Mgbe ahụ, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị na-ekwu na Personne kwuru, sị: "The Bible bụ site ná mmalite na ofụri ọrụ nke mmadụ" (8 Swedish Bible Society Kwa Afọ) Personne bụ otu n'ime ndị ikom atọ bụ onye nyere anyị 1917 ụka Bible. Ọ bụrụ na ị kwere na Personne, Bible bụ a ọrụ nke mmadụ mgbe ị nwere ike họrọ ndị Họpụtara. Ma ọ bụrụ na i kweere na Akwụkwọ Nsọ bụ nke Chineke na-ume na-echekwawo, wee họrọ My Ọkpara ọ hụrụ n'anya.
Jon. 6:47 Ọ kwere na m
The n'ozuzu odide ihe onwunwe na-enye ya support okwu m bụ eziokwu, ọ bụ ezie na ole na ole oge ochie n'ihe odide Grik etiyela okwu ndị a. Tatian mere a chịkọtara nke Oziọma anọ banyere 170 afọ, ebe ọ kemgbe m. Metzger enye ndị na-esonụ comment:
Na mgbakwunye na nke m bụ ma eke na-apụghị izere ezere. The mberede bụ na dịtụ ọtụtụ ndị depụtaghachiri guzogidere ọnwụnwa. Ọ bụrụ na okwu ama mbụ nọ na ederede, ya mere ọ dịghị onye ezi nkọwa dị ka ihe mere okwu ndị omitted. (2. Metzger, p. 183)
Ọ FNns bụghị ọtụtụ ihe odide nwere depụtaghachiri njehie a. The n'ozuzu odide ihe onwunwe na-enye anyị abụọ nhọrọ. Ọ dịghị onye pụrụ na-egosi na okwu ndị a site ná mmalite ma ọ bụ na-efu. The ise editọ-anọgide na dị ka ya antibysantinska arụ ọrụ nlereanya, iji họrọ ederede na deviates si "mgbe e mesịrị Ecclesiastical ederede" na ahịhịa na ha nwere ike na-ahụ naanị otu omume kpatara, ie na ndị depụtaghachiri ederede gbazie ihe kọrọ ebe a. Ha abụghị ndị na-emeghe ka kama doro anya echiche na onye depụtaghachiri Agbaghara ndị abụọ okwu n'amaghị ama na ahụ zigara njehie a na ndị ọzọ gị mbipụta. Ọ bụrụ na okwu na-na-efu ya mere na ọ na-ekwu na onye ọ bụla nke kweere nwere ndụ ebighị ebi, ma mgbe ahụ, na-efu na eziokwu dị mkpa na anyị ga-ekwere na Jizọs nwere ndụ ebighi ebi.
1 Cor. 15:47 Jehova si na mbara igwe
Dị ka ndị nna chọọchị dị ka ndị nna chọọchị na Onyenwe anyị na odide ya: Tetullianus, Hippolytus na Victorinus nke Pettau si 200 si na Basil Ukwu site na 300 si. Ndị na-esonụ Fathers na-adịghị Jehova na odide ya: Cyprian si 200 si, na Hilary nke Poitiers na St. Athanasius si 300 si. Nke kwesịrị ị na-ahọrọ? Ọ FNns n'oge nkwado maka ma nhọrọ, ma si na chọọchị nna na Gris oge ochie odide. Otu okpukpe ederede, ie Byzantine odide nwere na Jehova na ndị ọzọ na okpukpe ederede, ie Vulgate odide na-adịghị Jehova. Metzger kwuru na ha na-ahọrọ ahapụ Jehova. "Ọ bụrụ na okwu (Chineke) bụ na mbụ e, ya mere, FNns ọ dịghị ihe mere ya kwesịrị e ekpe." (2 Metzger, p. 501-502) Ọzọkwa ọ na-aghọ doro anya na ha bụ ndị na-adịghị njikere n'ihi na ọ pụrụ ịbụ a transcription njehie, na onye depụtaghachiri Agbaghara a okwu. Ọzọ mere nwere ike ịbụ na Eusebius, na onye were si Bibles na Emperor Constantine. Eusebius ekweghị na Jizọs bụ Chineke. Ebe ọ bụ na e nọrịị iche n'etiti dị iche iche ihe odide, dị ka FNns nakwa na o na ọ họọrọ odide ndị na-agbanwe agbanwe na ya kweere. Ọ FNns ederede ndị ọkà mmụta sayensị na-eche abụọ ochie odide Alef (Sinaiticus) na B (Vatican) si Bible ndị a Emperor Constantine nyere iwu site Eusebius. (7. Skeat, p. 21-22) Ebe ọ bụ na e nọrịị iche n'etiti dị iche iche ihe odide, dị ka FNns nakwa na o na ọ họọrọ odide ndị na-agbanwe agbanwe na ya kweere. Ọ FNns ederede ndị ọkà mmụta sayensị na-eche abụọ ochie odide Alef (Sinaiticus) na B (Vatican) si Bible ndị a Emperor Constantine nyere iwu site Eusebius. (7. Skeat, p. 21-22) Ebe ọ bụ na e nọrịị iche n'etiti dị iche iche ihe odide, dị ka FNns nakwa na o na ọ họọrọ odide ndị na-agbanwe agbanwe na ya kweere. Ọ FNns ederede ndị ọkà mmụta sayensị na-eche abụọ ochie odide Alef (Sinaiticus) na B (Vatican) si Bible ndị a Emperor Constantine nyere iwu site Eusebius. (7. Skeat, p. 21-22)
1 Tim. 3:16 Chineke pụta ìhè n'anụ ahụ,
Ebe a, ajụjụ bụ ma à ga-ọ bụla). A ike nkwenye na Jizọs bụ Chineke, Chineke, ma ọ bụ ọ na-(n'ụzọ nkịtị: pụta ìhè n'anụ. Ọtụtụ ozizi nduhie, dị ka Ndịàmà Jehova, ga-abụ ihe siri ike iji merie ndị na-akwado eziokwu a na Jizọs bụ Chineke puta ìhè n'anu-aru a hapụrụ jụụ . Ọtụtụ nna chọọchị n'oge ochie bụ na ihe odide ya, ma chọọchị nna Gregory of Nyssa, na-arụ ọrụ na 300 si, Chineke n'ihe odide ha. dị ka Metzger, ha chere na ọ bụ a mgbazi nke okwu, nke ka a na ngwa nbipute nwere echiche e depụtara na-ezighị ezi na-agbanwe ya Chineke, ọzọ nhọrọ na Metzger na ndị ọzọ editọ ndị oghe maka onye ọ bụla na a na ngwa nbipute gbanwetụrụ Chineke ka "enye a ukwuu ikwesi olu ike nkenke." Metzger kwuziri tinyere Origen nkwado maka na ọ ga-ahụ, ma anyị maara na Origen kweghi ozizi nke ato nimeotu. (2. Metzger, p. 573-574) E a nke ndi-agha chi na 300 na ọ bụ na-adịghị anya-N'ubochi iche na e nwere ndị agha nke chọrọ wepu Chineke si ederede.
The ise editọ nke ọhụrụ isi ederede nke uche na nke a dum nnukwu ngalaba nke ederede na Oziọma Mak bụ a emeju. Mgbalị e mere iji wepụ ihe ndị a niile iri na abụọ amaokwu nke Bible, ma mgbe ahụ họọrọ ọtụtụ Bible na-agụ akwụkwọ na-ịzụta translation. Ya mere, agaghị anwa anwa nsụgharị nke oge a na-ewepụ ndị a iri na abụọ amaokwu, ma pịnye na bụ ndọtị na-abụghị nke na mbụ Gospel, nke na-emetụta, n'ihi na. Atụ. 1917, Bible 2000 King James na nuBibeln. The na-egosi na amaokwu ndị a bụ ezigbo bụ nnọọ ike. Ọ FNns 620 n'ihe odide Grik nke nwere Mark, na 618 n'ime ndị a FNns ndị a iri na abụọ amaokwu nke na-. Ọ bụ naanị na abụọ odide Alef (Sinaiticus) na B (Vatinanus) na ha na-efu efu. N'oge odide si n'otu oge ahụ, A, na niile iri na abụọ amaokwu. All ochie Latin odide nwere amaokwu ma e wezụga K, nke nwere a obere imecha. Nna chọọchị n'oge aguputa si ndị a iri na abụọ amaokwu, si Justin Martyr ca. 150 OA .. n'ihu na Irenaeus kwuru na afọ 180 dum amaokwu Mark. 16:19. Olee otú amaokwu-kwukwara ma ọ bụrụ na ha adị afọ 200 tupu Sinaiticus na Vaticanus dere? Ke adianade do, ma ndị a odide, Alef na B omits amaokwu, na-ahapụ a nnukwu efu ohere, dị ka a ihe ịrịba ama na-efu Bible ederede. Eleghị anya ha na-ele anya fnna efu ederede dee e mesịa. Text Nkatọ na-ekwu na ndị ikpeazụ iri na abụọ amaokwu nwere a dị iche iche style n'ihi abụọ ahụkarị okwu na-efu efu, azụ / azụ na ozugbo, ma ederede na-eme nchọpụta Burgon ka nyochaworo okwu na chọpụtara na okwu ndị a na na-na-kọrọ ọtụtụ ndị ọzọ isi nke Mark. Ha na-arụ ụka na Eusebius na Jerome kọrọ amaokwu ndị a na ọtụtụ n'ime ya odide. Ma nke a bụ ukwuu ekwekọghị, n'ihi na ma ha na-arụ ụka na-akwado ọhụrụ isi ederede na ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nke ihe odide ndị dị mkpa. Ma na nke a, ọnụ ọgụgụ nke mberede mmetụta. Ọ FNns ọ dịghị nke ha arụmụka jide maka a dị oké egwu, nyochaa. Ọ bụ n'ezie a mara mma dị N'ubochi echiche na mmadụ ga-esi na-tinye iri na abụọ amaokwu, mgbe ị maara ihe akwa ya pụta ma ọ bụrụ na ị na tinye ma ọ bụ wepụ.
Ọ bụghị ngụkọta odide ihe onwunwe ma ọ bụ e kwuru si na chọọchị nna onye mere ihe ahụ Metzger na ndị ọzọ editọ atụle amaokwu ndị a kwukwara kama ha na-arụ ọrụ ihe nlereanya nke gụnyere abụọ iwu:
Mgbe B (Vatican) na Alef (Sinaiticus) na-kweere, ma dị iche na nke ndị ọzọ ihe odide na anyị na-eso abụọ ndị a.
Mgbe FNns iche n'ihi ya, ọ kasị mma ịhọrọ ederede na si dị iche na mgbe e mesịrị okpukpe ederede, ie Byzantine odide.
Anyị a-arahụ site iri na abụọ amaokwu na-egosi otú nhọrọ nke ederede ọhụrụ isi ederede gara. Ụfọdụ n'ime ndị a amaokwu metụtara ahụ na-emegiderịta na ndị ọzọ na usoro nke nkwado maka Jesus chi. Nkwado nke dị iche iche ihe odide nwere ike ịbụ dị iche iche site n'otu ebe ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ihe nkwado bụ n'etiti ndị kasị ochie odide ike na mgbe ụfọdụ na-adịghị ike. Ma ọtụtụ mgbe, Byzantine ederede / nata Text nkwado nke onye ma ọ bụ karịa nnọọ agadi n'ihe odide Grik. Text Scientists na-ekwu na taa anyị nwere ohere okenye na mma odide karịa ha nwere na 1500s, ma B (Vatican) ama ama mara na 1500s na Alef (Sinaiticus) bụ n'ezie bụghị ezigbo aka dere. Ọ bụ a mara eziokwu ahụ bụ na FNns ọtụtụ transcription njehie na a na ihe odide. Ndị dị otú ahụ a ọjọọ aka dere kwesịghị n'ebe FL uence ọ natara ọhụrụ odide Grik. Ọ bụ ezie na e odide ndị mma taa karịa na 1500s, ọ na-aghọ oké mkpa ajụjụ a: Ònye ga-eme ka nhọrọ? Ndị na-Kraịst ma kwere na Akwụkwọ Nsọ na e nyere site n'ike mmụọ nsọ nke Chineke, na-echekwawo site Jehova nduzi maka oge anyị na-eme ka a nhọrọ nke ederede. Ma ndị na-ekweghị na Akwụkwọ Nsọ e nyere site na mmụọ nsọ, na-ekweghị na Chineke chekwara ederede, ha na-eme ọzọ nhọrọ. N'ihi na ha kweere na ọnụ na nnyefe, ha pụtara na ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe mgbe ọ FNns iche dị na ederede, họrọ ederede na si dị iche na mgbe e mesịrị Ecclesiastical ederede, ie Byzantine. Na nke a nyochaa, anyị nwere ike ikwubi na ọ bụrụ na ihe ndị ahụ bụ n'etiti Byzantine na Vulgate odide ka ha họọrọ arapu Byzantine ederede. Ha chọrọ ime ihe na-na-eso ha mmasị odide B (Vaticanus), ma anyị nwere ike ịhụ mgbe ha họọrọ pụọ a na ihe odide n'ihi na ọ bụ na-agbanwe agbanwe na Byzantine odide na na nhọrọ n'etiti esonụ B (Vatican) ma ọ bụ arapu Byzantine ederede, ka ha họọrọ arapu Byzantine ederede. Nke a antibysantiska arụ ọrụ nlereanya na-adịghị otú maara nke ọma, onye nwere ike ịgụ banyere otu n'ime Metzger akwụkwọ. (1. Metzger, p. 87) Nke a abụghị a na nkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ ihe nlereanya ma dabeere enweghi uche ekweghiekwe Byzantine odide na nata Text. Ndị dị otú ahụ a na-arụ ọrụ ihe nlereanya bụghị naanị unscientific ma bara nnọọ unbiblical n'ihi na ọ na eleghara Bible na-agba akaebe banyere onwe ya.
Ọ bụrụ na Kraịst kweere na okwu Chineke na-exhaled na nọgidere na-eme ka a nhọrọ, dị ka nwere odide Grik mbụ, nke ghọọ FNns na-anọchi anya na mkpokọta odide ihe onwunwe, ie Byzantium ederede nke ahụ fck a n'ihu nke nata Text. Ma n'ụzọ dị mwute, ọhụrụ isi ederede, na ya niile mmejọ na-emegiderịta kemgbe ihe ndabere maka fọrọ nke nta niile Swedish nsụgharị n'oge 1900 na mmalite 2000 si, na abụọ wezụga. Nkpa-n'aka-idegharị Karl XII Bible 1923 Mb, ma dabere na nata Text. Naanị na New Testament gbasara mgbanwe gburugburu 3300 ebe! N'ihi na ndị na-achọ ịma ihe, anyị nwere ike ikwu na ịga na website, bibel.se , ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ videos na ọtụtụ isiokwu na nrụrịta ụka.
Bo Hagstedt, onyeisi oche
Lee gara aga ngalaba:
Bible - An ekwesịghị ịdị na isi ederede - part 1 of 5
Bible - An ekwesịghị ịdị na isi ederede - part 2 of 5
Bible - An ekwesịghị ịdị na isi ederede - akụkụ 3 of 5
Bible - An ekwesịghị ịdị na isi ederede - akụkụ 4 of 5
Bible - An ekwesịghị ịdị na isi ederede - akụkụ 5 of 5
Ndozigharị Bible si website: www.bibel.se
Ndozigharị Bible - Old Testament
Mb - New Testament
M zụtara Mb | apg29
Bruce M. Metzger, The Text nke New Testament, Ọ Nzipu, Nrụrụ Aka na NYEGHACHI, 4th mbipụta, Oxford University Press na 1968.
Bruce M. Metzger, A Nnyocha e nyochara Commentary on the Greek New Testament, 2nd mbipụta, Deutsche Bibelesellschaft / German Bible Society, Stuttgart, 8th obibi akwụkwọ. Na 2007.
John William Burgon, idegharị Revised, nke abụọ obibi, Dean Burgon Society Press, New Jersey, na 2000.
JA Moorman, Early Odide, Church Fathers, na Ikike Version, The Bible maka Today Press, New Jersey, 2005. Moorman ka weere ihe odide na-egosi FNns na ọbụna na-ehota Ndị Nna Chọọchị. The isi mmalite o ji dị Tischendorfs asatọ mbipụta, Nestle-Åland version 26, United Bible Societies atọ mbipụta na 1975, map nke ihe odide na The Text nke New Testament site Kurt na Barbara Åland, OA Leggs mbipụta nke Matiu na Mark, ọtụtụ ruturu na- e si von Soden, Hodges na Farstad, na Åland kọwara ná mkpirikpi nke Oziọma na Hoskier Mkpughe.
Matthew Black, Peake si Commentary na Bible, Revised Edition 1962nd
Bruce M. Metzger, The New Testament, Ya Background, Uto, na Content, Abingdon Press, 1965th
TC Skeat, The Codex Sinaiticus na The Codex Alexandrinus, London, na British Museum ke 1963.
Swedish Bible Society isua akụkọ, nkeji nke April 21 na 1886.